Tag: dalab metric | Martech Zone
Tag: dalab metric
Tilmaamaha Bilowga ee Suuqgeynta Mawduuca
Khamiis, May 16, 2013 Douglas Karr
Aaminaad iyo hay'ad… iyagu waa labada erey ee kaliya ee udub dhexaadka u ah istiraatiijiyad suuqgeyn ah, sidaan qabo. Maaddaama ganacsiyada iyo macaamiisha ay eegaan internetka si ay u baaraan alaabadaada iyo adeegyadaada, waxay u badan tahay inay horeyba u gaareen go'aan inay iibsadaan. Su’aashu waxay tahay inay wax kaa iibsanayaan iyo in kale. Suuqgeynta waxyaabaha ayaa fursad kuu ah inaad ku dhisto kalsoonidaas iyo maamulkaas khadka tooska ah. Ku duubista labada kheyraad iyo geeddi-socodka ku saabsan mawduucaaga